SingForYou.net - Su
Tags : Su.....( Minkha~!)
By : Minkha on Jan 19, 2010
ဒီသီချင်းက ကျနော် အရမ်းကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးပါ....... သည်းခံနားဆင်ပေးတဲ့ SFY က ညီအကို ၊ မောင်နှမ အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ..... မင်းခ~!
maureen on Jun 1, 2010 0
a yan kg tal bro yae.. arr pay nar sin twar per tal hin..********************** for u...
taunt tat su twe pyae sae thar,,,,ohne phawt ,,
thuyeekg on Jan 21, 2010 0
sumaylay on Jan 20, 2010 0
really nice2listen bro... 5* :))))
punttatkaya on Jan 20, 2010 0
tee kan sa yar ma lo ag loot kg tr pal bro G yar...really good...:clap..:clap...:clap
ဘရားသားကြီးရေ ဆိုထားတာ ကောင်းလှချည်လား စစ်ဗိုလ်လုပ်ဘို့တောင် မကောင်းတော့ဘူး အဆိုတော်ဖြစ်ဖြစ် မင်းသားဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဗျာ အားပေးမဲ့သူတွေ များလောက်တယ် ဒါမှမဟုတ် ပေါက်လောက်တယ် (ခဲနဲ့ ) ဟီးဟီး ဆိုထားတာ ကောင်းမှကောင်း ခုံပေါက်ပြီးဆိုနေသလိုပဲနော် ရှယ်ပဲဗျာ အားပေးသွားတယ် ************************SKB
skywalker on Jan 20, 2010 0
ဇွတ်ကြီး......တောင်းတဲ့ ဆုနှင့်ပြည်.ပါစေသား..ကောင်လေးရ......millione for star *******
lovelybaby11 on Jan 20, 2010 0
lalaynge on Jan 20, 2010 0
whitekisslay on Jan 20, 2010 0
Ayann kyite te thi chinn layy ka su* pot....:)...ko Minkha yay voice ne ayann narr htoung lol kaung tal.....ko pine style layy ne singss twer tar nice par shin********************nor...>
good shal gyi pel...hel twar ter...kg mha kg par...great..great...great...5*4u.
mrcastle on Jan 20, 2010 0
သီချင်းဟောင်းလေးကိုစတိုင်လ်သစ်လေးနဲ့ဆိုသွားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် ညီရေ .
SCH7677009 on Jan 20, 2010 0
kaung loon hla par tal nyi taw lay yae...
forevermoe on Jan 20, 2010 0
good tal ..good tall...ta kal kg tar par ..********************:)
paradise on Jan 20, 2010 0
hippo on Jan 20, 2010 0
သည်းခံနားဆင်စရာမလိုအောင် ကောင်းပါတယ် . . . *****
susannyunn on Jan 20, 2010 0
yoat myin tan kyar g yay.....wat kin lay nelz sho tot puu larz way.....aheeeeeeeeee:)))) chate ma choe par puu... kwint loot lite par te...asho kg loz par...yautzzz.....fish starzzzzzzzzzz for uuuuu....bravooooooo....:clap :clap :clap......>>>>>>>>>
babylay on Jan 19, 2010 0
kg tal song lay ta pote par bal kwal, keep on bro
nanwarwarmg on Jan 19, 2010 0
really nice one par Minkha yae!!!5stars for u.
soethuwin on Jan 19, 2010 0
very good bro;*****
chan2008 on Jan 19, 2010 0
စိတ်မဆိုးပါဘူး... ခွင့်လွတ်နေပါတယ်.... အော် ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာ... အော် သိပါတယ် အရင်စိတ်က.. အရူးလိုလေ... လူများတွေကို မယုံနဲ့လို ကို ပြောထားတယ်လေ နယ်သားရေ.. စိတ်ချ ဘယ်သူမှ မလုပါဘူး... လုဖို့လည်း မကြိုးစားပါဘူး.. စိတ်ချနော်... ကောင်မလေးက... အတင်းကျွန်တော်ကို လိုက်ကြိုက်ရင်တော့ မတတ်နိုင်ဘူးနော်... လွန်နေရင် တော့... တစ်မျိုးပေါ့.... အခုတော့ မတအားမက ထင်ခိုင်းနေတယ်... plain ကြီး :-O အော် ခြေနှေးရင် တော့ခံပေါ့ဗျာ... ကြောက်ပါနဲ့ဗျာ... ယူမှာတော့ အသေအချာပါ... ကောင်မလေး ကြိုက်ရင် တစ်မျိုးပေါ့နော်... ဟုတ်လား... ဘုရားကဘယ်လို ပေးတာလဲ... ရော့အင့် ဆိုပြီးပေးထားတာလား.. အတော် သဘောကောင်းတာပဲနော်... မရှိမဖြစ်တာက... မရှိလို့မဖြစ်တာလား... မဖြစ်လို့မရှိတာ... အား ရော ကုန်ပြီ... ဖြေရှင်းဦးဗျ... ဆေးများသွားလို့... ပါ... မဟုတ်ဘူးလား.. အမှန်တော့ အစ်ကို ရူးတာပါဗျာ... အဲဒါတကယ်သေချာပါတော့.... ကောင်းတယ် ရှယ်ပဲ style တွေ ပဲတွေနဲ့... နည်းနည်း လောက် ချေးဦး... အားပေးသွားတယ်နော်... နယ်သူchan2008
khaki on Jan 19, 2010 0
good ma good pal.....arr kya tal byarrrrrrrrrr
ngwesele on Jan 19, 2010 0
nar htaung lo ayan kg par tal...arr pauy twar par tal ko minkha................ngwesele